Iimpawu zePhysical Properties zeMuscovite kunye nePhlogopite
Umba Imuscovite IPhlogopite
Umbala umbala ongenabala, omdaka, ompinki, u-silika oluhlaza ibhanki yodongwe, umdaka, luhlaza nzulu, mnyama
Elubala% 23--87.5 0-25.2
Ikhonkco Iglasi yeglasi, iiparele kunye nesilika Ukukhazimla kweglasi, kufutshane nokukhanya kwesinyithi, kunye ne-grease luster
Ingcaciso 13.5 ~ 51.0 13.2 ~ 14.7
Ubunzima Morse 2 ~ 3 2.5 ~ 3
Indlela yeattenuatedoscillator 113 ~ 190 68 ~ 132
Ukuxinana (g / cm2) 2.7 ~ 2.9 2.3 ~ 3.0
Ukunyibilika / c 1260 ~ 1290 1270 ~ 1330
Ubungakanani bobushushu / J / K. 0.205 ~ 0.208 0.206
Ukuqhutywa kwe-Thermal / w / mk 0.0010 ~ 0.0016 0.010 ~ 0.016
Umlingani ongumlinganiso (kg / cm2) 15050 ~ 21340 14220 ~ 19110
Amandla ombane / (kv / mm) we-0.02mm sheet eshinyeneyo 160 128
I-Huajing yeplastiki ekumgangatho we-mica powder, esetyenziselwa ubukhulu becala iiplastikhi zobunjineli ukwandisa imodyuli yokugoba kunye nokuguquguquka; Kwindawo yeplastikhi yezincedisi zeemveliso ze-elektroniki, emva kokongeza imicah, zinokucokiswa ngokudibeneyo kunye noyilo. inokuphucula ukumelana nemozulu kweemveliso zeplastiki, ukuze iiplastiki zobunjineli zikwazi ukumelana neqondo lobushushu kunye nokwahluka kwendalo; iphucula kakhulu ubushushu ukuqinisekisa ukuthembeka kokusebenza kombane ophezulu; Inokuphucula ukubhobhoza kweemveliso ezithile zeplastiki ngokunjalo.
I-mica yegolide ihlala ityheli, imdaka, mnyama mnyama okanye mnyama; ubumdaka beglasi, umphezulu wokuqaqamba kweperile okanye ubumenyemenye bentsimbi. Ukukhanya kwe-Muscovite yi-71.7-87.5%, kunye ne-phlogopite yi-0-25.2%. Ubunzima be-Mohs ye-Muscovite yi-2-2.5 kwaye ye-phlogopite yi-2.78-2.85.
Ukutyeba kunye neepropathi zomphezulu zeMuscovite azitshintshi xa kushushu kwi-100,600C, kodwa ukomelela, iipropathi zoomatshini kunye nezombane ziyatshintsha emva kwe-700C, luthambe luye lwalahleka kwaye lwaphuka, kwaye ulwakhiwo lutshatyalalisiwe ngo-1050 ° C. xa iMuscovite imalunga ne-700C, ukusebenza kombane kubhetele kuneMuscovite.
Ke ngoko, imicah yegolide isetyenziswa kwiiplastikhi ezingenazo iimfuno eziphezulu zombala kodwa ukumelana nobushushu obuphezulu.
Ukusetyenziswa kweMika kwi-PA
I-PA inefuthe elisezantsi lamandla kunye nokufunxwa okuphezulu kwiqondo lobushushu elomileyo nelisezantsi, elichaphazela uzinzo lwalo mbono kunye neempawu zombane. Ke ngoko, kufuneka kuguqulwe iziphene ze-PA ngenjongo.
I-Mica yinto efanelekileyo yokufaka izinto zeplastiki, ezineempawu zokumelana nemozulu ezigqwesileyo, ukumelana nobushushu, ukumelana neekhemikhali, ukuqina, ukufakwa kombane njalo njalo. Inesakhiwo esingacacanga kwaye inokuyiphucula i-PA kwimilinganiselo emibini. Emva kokulungiswa komphezulu, i-mica yongezwa kwi-resin ye-PA, iipropathi zoomatshini kunye nozinzo lwe-thermal zaphuculwa kakhulu, i-shrinkage yokubumba nayo yaphuculwa kakhulu, kwaye iindleko zemveliso zancitshiswa kakhulu.
Egqithileyo Umhlaba womile owomileyo